Filannoo Tigraay: ‘Filannichi faallaa heeraati jechuuf bu’uurri heeraa hin jiru’ – Awwal Aloo (PhD) – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsFilannoo Tigraay: ‘Filannichi faallaa heeraati jechuuf bu’uurri heeraa hin jiru’ – Awwal Aloo (PhD)
Biyya UK Univarsiitii Keelitti barsiisaa seeraa kan ta’aniifi dhimma siyaasaa Itoophiyaafi gaanfa Afrikaa kan xiinxalan Awwal Aloo (PhD) filannoon naannoon Tigraay Roobii darbe gaggeesse ”seeraan ala jechuuf bu’uurri heeraa hin jiru,” jedhan.
(bbcafaanoromoo)–Mootummaan Federaalaa filannoon biyyaalessaa marsa 6ffaan sababa weerara Covid-19 yeroo biraatti akka darbu murteen dabarsee ture adeemsi itti murtaahe sirrii miti jedhamuun paartilee mormituu tokko tokkoon qeeqamaa ture.
Paartilee qeeqaa turan keessaa dhaabni naannoo Tigraay bulchu TPLF adda dureedha. Murtee mootummaa Federaalaa diduunis Roobii darbe filannoon sadarkaa naannootti gaggeeffameera.
Bu’aan filannoo kanaas kan naannicha bulchaa jiru TPLF sagalee ol-aanaa argachuun mo’ateera.
MM Abiy Ahimad jala bultii filannoo nannichaarratti gaaffiifi deebii miidiyaa biyyaalessaan tamsa’erratti filannichi ”akka mana seeraan ala ijaaramee mana caraqaati,” jedhaniiru.
Itti-dabalanuus ”iddiriifi uqqubiin gandaa mataa nu hin bowwaafachiisu, murteessaan filannoo biyyaalessaarratti hirmaachuu isaaniiti,” jedhan.
Awwal Aloo (PhD) BBC World Service sagantaa News Hour waliin gaaffiifi deebii gaggeessaniin, filannoo naannoo Tigraayiin seera qabeessa miti jechuuf bu’uurri heeraa hin jiru jedhan.
Federeshinii Itoophiyaa keessatti naannoon Tigraay nannoolee biroorraa haala wayyoo qabuun kan bilisummaa qabuufi mirga heeraan kennameef kan shaakalaa jiru ta’uu Dr. Awwal dubbataiiru.
”Dhaabni biyya bulchaa jiru filannoo gaggeessuuf haalli mijataan hin jiru jedhee filannichi akka darbu gochuu isaatiin qofa, filannoon Tigraay faallaa heeraati, seera qabeessa miti jechuu mitiis,” jedhu.
”Walgaarreffannaafi muddamni amma mootummaa Federaalaafi dhaaba naannoo Tigraay bulchu gidduu jiru, waldhabdee ilaalcha siyaasaa dhaabota lamaan kanaa malee; heera biyyaafi seera waliin hedduu wal hin qabatu,” jedhan.
Heerriifi seerrii falmii isaanii ittiin jabeeffachuuf waan itti fayyadamaniidhas jedhu.
Mootummaan Federaalaa dhimma naannoo Tigraay keessa humnaan galuuf kan yaalu yoo ta’e, waldhabdeen mootummaa federalaa fi naannoo Tigraay ittii hammaate waraanatti ce’uullee danda’a sodaa jedhus qabu. Dr. Awwal.
Dhaabni waggoota 30 ta’anii Itoophiyaa sirna Dimookrasiitti karra cufeen dhaaba bulchaa ture kan hoogganaa ture Addi Bilisa Baasaa Ummata Tigraay; dhaaba haaraa MM Abiy Ahimad ijaaran dhaaba Badhaadhinaatti makamuu dhabuun madda waldiddaa amma uumamee jiru kanaati jedhan.
Akka karoora qabameetti filannoon osoo gaggeeffamee Paartiin Badhaadhinaa erga hundaa’ee yeroon gabaabaa waan ta’eef, injifachuu hin danda’u turees jedha Dr. Awwal.
Heerri Itoophiyaa naannoleen mootummaa federaalaa ijaaran, aangoo ofiin of bulchuu jabaa akka qabaatan hayyamaa kan jedhan namni kun, bara TPLF olaantummaa biyya bulchuu qabaachaa tureefi ammas jechaan malee qabatamaan raawwatamaa hin jiru jedhu.
Amma muddamni mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay hammaachaa deemuunsaa, tarii naannoon hunda caalaa ofiin bulaa jiru fottaquu malti sodaa jedhu uumeera.
Seenaa Itoophiyaa keessatti naannoo gahee guddaa qabdu, akkasumas baayyina uummatan biyyattii keessaa saba sadaffaa ykn arfaffaarra jiraachun yoo fottoqxe, qaama Itoophiyaa strategic ta’etu fottoqe jechuu akka ta’e ibsan.
Gama kaaniin MM Abiy Ahimad gara aangootti dhufanii fudhatamni qaban akkaan dabalee Badhaasa Noobeelii Nagaallee injifachuun ni beekama.
Rifoormiiwwan dimookrasiif karra saaqan hedduus eegalanii turan.
Ofii haala amma jiruun rifoormiwwan kanatu waldhabdee saba gidduutti uume moo? MM Abiyyitu biyyattiin tokkummaan akka deemte gochuu dadhaban jedhe? jechuun gaaffiin dhiyaateera.
Dr. Awwal ”jalqabumayyuu MM Abiy rifoormiiwwan eegalan raawwachuuf miti kan eegalan,” jedhu.
”Amma akka ilaallutti kaayyoon isaanii deeggarsa argatanii aangoo isaanii hanga cimsatanitti tooftaa itti dhimma bahaniidha.”
Ejjennoon MM Abiy ji’oota 6fi7 darban jijjiirama dhufee ji’a lamaan as erga artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee booda, guutummaatti mormitoota isaanii hunda gara dhabamsiisuutti ce’aniirus jedhan.
”Amma rakkoowwan Itoophiyaaf namni dawaa kennuu danda’u isa qofa ta’eetti of dhiyeessaa jira.”
Haala amma jiruun MM Abiy mootummaa abbaa irree erga bara 1960 booda Afrikaan kolonii jalaa baatee mul’atanitti jijjiiramaniiru, kunimmoo milkii-dhabeessummaadhas jedhan hayyuun seeraa kun.
MM Abiy Ahimad erga filannoon yeroo biraatti akka darbu murtaahee booda, qaamoleen Itoophiyaa diiguu barbaadan jiraachuufi osoo isaan jiranii, mootummaan isaanii jiruu ”hawwiin Itoophiyaa diiguu” akka hin milkoofne dubbataniiru.
Kanaafis dhaaba isaanii keessa namoota jiran irraa eegalee, nama kamuu irratti tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu akka fudhatan beeksisan.
Regional ruling party wins elections in Ethiopia’s Tigray region -election commissioner